Isamsung isebenza ukwazisa iikhamera phantsi kwescreen | I-Androidsis
Indawo yeekhamera zangaphambili kwiifowuni ze-Android zihlala ziguquka. Ukungeniswa kwezinto ezinjengeenotshi okanye umngxunya kwisikrini kuzise utshintsho olubalulekileyo malunga noku. Isamsung ngoku ijonge ukuya kwelinye inyathelo ngokuya ngeefowuni zayo ezilandelayo. Ukusukela inyathelo elilandelayo lenkampani yaseKorea kukufihla wathi iikhamera ngokupheleleyo ezantsi kwesikrini.
Le projekthi intsha yinkampani yaseKorea kukuzivelela koyilo olo yenziwe kwi-Galaxy S10 kunye ne-S10 + neekhamera zayo zangaphambili. Ke i-Samsung ijonge ngoku fihla ikhamera phantsi kweglasi kwiscreen. Ubhejo olunzima noluyingozi, kodwa lunomdla.
Isamsung iyabona ukuba yintoni igumbi lokuphuculwa ngokwendlela yoyilo kuluhlu oluphezulu. Nangona i-brand yaseKorea inebhongo ngotshintsho abalwenzileyo kwi-Galaxy S10, ngenxa yobunzima bokugrumba iphaneli ye-OLED, bafuna ukuzama uyilo olutsha. Yile nto bayenzayo ngale nto intsha, ngoku kuphuhliso.
Umbono kukwenza iifowuni zesikrini zonke ngale ndlela. Ke, ngekhe ubhenele ekutyibilikeni okanye ekujikelezeni iikhamera, njengeGalaxy A80 yakho. Nangona kunokwenzeka ukuba inkampani izakuthatha iminyaka embalwa ukwenza oku kube yinyani. Okwangoku abakhange bathethe nto malunga nelizwe ekule projekthi.
Kwiphepha kuvakala kunomdla kakhulu. Ukongeza, inokubonisa ukuba i-Samsung isasebenza ukubuyisa isikhundla sayo njengegama elitsha. Nangona kwelinye icala iboniswa njengeprojekthi enzima. Ukongeza ekwenzeni amathandabuzo amaninzi malunga nokusebenza Iikhamera. Ke kuyakufuneka sibone ukuba kwenzeka ntoni.
Leyo okwangoku kuphuhliso ayithethi isiqinisekiso. Kuba i-Samsung inokubona ukuba yinto engasebenziyo, ke bathatha isigqibo sokuba bangazisi iikhamera phantsi kwescreen. Ngayiphi na imeko, sinethemba lokufumana idatha evela kwinkampani kule ndawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung isebenza kwiikhamera ezingabonakaliyo phantsi kwescreen
Ingasetyenziswa njani i-WhatsApp kumanyathelo amabini okuqinisekisa